January 03, 2018 श्रीस्वस्थानी
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ । हे ! अगस्त्य मुनि, पहिले यो संसारमा प्रलय भएर शून्यबाहेक केही नभएको अवस्थामा महामायाका प्रभावले सबै ठाउँमा जलैजल थियो । फेरि महामायाका प्रभावले उक्त जल अनन्त क्षीर सागर भयो । त्यसैबेला महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमाथि शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो । उक्त परब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवानको नाभिमा कमलको उत्पत्ति भयो र धेरै माथिसम्म डाँठ फुलेर हजारौ. पातहरू फक्रिएर फुल्दा त्यस पद्मकल्प कमलमाथि ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो । अनि ब्रह्मालाई सृष्टि गरौं भन्ने प्रेरणा प्राप्त भयो । त्यसैबखत विष्णुको कानबाट कानेगुजी निस्कियो र त्यस कानेगुजीबाट मधु र कैटभ नामका दैत्यहरू बने । ती दैत्यहरू यताउती हिँडडुल गर्दा जताततै पानी नै पानी देखे । अनि सोही कमलको डाँठबाट माथि उक्ले । कमलका पत्रहरू झार्दै ब्रह्माजीलाई खसाउने प्रयत्न गरिरहे । त्यो देखी डराएर ब्रह्माजीले महामायाको स्तुति गर्नुभयो । महामायाले विष्णु भगवानलाई जागा गरार्इ दिनुभयो । विष्णु भगवान् जागा भइसकेपछि दैत्यहरूले ब्रह्मालाई सताइरहेको देखेर त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । तर दैत्यहरू विष्णु भगवानमाथि जाइ लागे । त्यसपछि विष्णु भगवान् र दैत्यहरूका बीचमा पाँच हजार वर्षसम्म घोर घमासान युद्ध भयो, तर कसैको पनि हारजित भएन । अनि विष्णु भगवानले हार मानी ‘हामी यसरी कत्ति लड्ने, बरु तिम्रो इच्छा के छ ? वरदान माग’ भन्नुभयो । तर मधु र कैटभ दैत्यहरूले अहङ्कारले ‘तिमीले हामीसँग पो वरदान माग्नुपर्छ, के वरदान चाहियो ?’ भने । विष्णु भगवानले पनि ‘मागेको वर दिनुपर्छ’ भन्ने वाचा गराए, अनि ‘हे दैत्य हो ! मेरो हातबाट तिमीलाई मार्न पाऊँ’ भने । अनि दैत्यहरूले भने ‘हे छलकपटी विष्णु ! तैंले छल गरी वरदान मागिस्, तर हामी वचनमा हार्दैनौं, तिम्रो इच्छा पूर्ण होस् तर हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार ।’ भने । सम्पूर्ण ठाउँ जलामय मात्र भएकाले विष्णुले आफ्नै काखमा राखी मधु र कैटभलाई मारे । अनि ब्रह्माजीलार्इ पनि मधु र कैटभका शरीरका अङ्गहरूबाट स्थलहरू बनाउने उपाय प्राप्त भयो ।
इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याः व्रतकथायां मधुकैटभबधवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।।